Huawei dia tsy handao ny Android, HongMeng dia ho fanampiny | Androidsis
Betsaka amintsika no nieritreritra an'izany ny firongatry ny fihenjanana eo amin'ny Huawei sy ny governemanta tarihin'i Donald Trump, izay tonga nanohana ny orinasa manakana azy ireo tsy hahazo fanavaozana Android tao amin'ny terminal-n'ny terminal, dia nisy valiny mazava avy amin'ilay mpanamboatra aziatika: ny vaovao Rafitra miasa HongMeng, safidy iray amin'ny ekosistra Google.
Marina izany farany nanala ny veto i Etazonia ho an'ny orinasa monina any Shenzhen, saingy nanantena izahay rehetra fa tsy ho ampy izany. Na i Huawei aza dia efa nanazava mazava tsara fa miasa amin'ny tontolo iainana manokana mba hialana amin'ny fampiasana Android. Nefa toa tsy ho toy izany intsony amin'ny farany.
Huawei dia hanohy hampiasa Android amin'ny findainy
Ary i Catherin Chen, mpikambana ao amin'ny filankevitry ny Huawei ary filoha lefitra zon'ny orinasa, dia nanamafy fa tsy mbola novolavolaina ho an'ny finday avo lenta i Hongmeng. Andao, ny tanjony dia ny hanomezana azy "fampiasana indostrialy" ho an'ireo mpamily isan-karazany sy ny fitaovana mitovy aminy. Raha ny fahitana azy, ny latency ambany dia ambany dia mety indrindra amin'ireo karazana rafitra ireo. Saingy mazava ho azy, mifanohitra tanteraka amin'izay nolazain'ny mpitantana ambony hafa izany.
Fantatsika aza fa mihoatra ny indray mandeha ny mpiasa mihitsy no nanisy marika OS HongMeng ho solon'ny Android. Amin'izay fotoana izay Huawei dia nanomboka nampiseho ny tontolo iankinany tamin'ny orinasa aziatika hafa, toa ny Xiaomi na OPPO. Ka inona no nitranga? Fa maninona no niova hevitra ilay mpanamboatra aziatika?
Tsia, tena tsotra: azo antoka fa nanisy marika amboara tompon-daka ilay mpanamboatra aziatika mba hanandramana manala vy amin'ny vatan'ny governemanta Donald Trump. Niavaka ny fidinan'ny varotra vokarin'ny marika, ankoatry ny fahasimban'ny sariny. Alao an-tsaina ny zavatra mety hitranga raha tsy naneho hevitra i Huawei fa manana rafitra fiasa manokana miasa tsara kokoa noho ny Android izy ireo ary manana fotodrafitrasa ilaina izy ireo handefasana fanavaozana goavana amin'ny terminal rehetra ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Huawei dia nanova ny sainy: hanohy hiloka amin'ny Android izy
Ahoana ny fanatsarana ny fiainana manokana amin'ny WhatsApp